I-Best Car ne-Coach Rental Company Inkampani yakwa-Odisha - I-Sand Pebbles Tours
Izivakashi nezivakashi eziya endaweni ye-Odisha entwasahlobo, ehlobo noma ewa, ukuhamba kuyinto yokugcina okufanele ibangele ukukhathazeka noma ukukhathazeka. Ngenkathi kungaba yinselele ukuhamba endaweni, ayikho imoto engcono kakhulu yokuqasha inkampani kanye nokuqasha umqeqeshi u-Odisha kuneSand Pebbles Tours. I-ejensi, isazi sezokuhamba kwezobuchwepheshe ingenye yezinto ezihamba phambili inkampani yokuqasha imoto kanye nomqeqeshi u-Odisha etholakala enhloko-dolobha yaseBhubaneswar ngezimoto zokunethezeka ukuze kuthunyelwe amaqembu azo zonke izikhulu ngokunethezeka nesitayela.
I-agency isigaba sokuthutha izivakashi izinikele ekudleni izidingo eziyingqayizivele zazo zonke izihambeli ezize esifundeni ukuhlola izimfihlakalo nobukhulu be-Orissa yomlando. Ephethe imoto enkulu yezimoto zokunethezeka ezigcinwe kahle kuzo zonke izinto, izinhlobonhlobo, nobukhulu, inkampani inemoto ephelele yokuhlola indawo enobunzima noma ukuvakashela idolobha. Kusukela kuma-sedan angabizi kuya kuma-coaches amakhulu amaqembu, ama-Sand Pebbles Tours anganikeza okungcono kakhulu ekuthuthweni okunethezeka kokuthuthwa kuzo zonke izindawo esifundeni.
Kusuka kubanikazi bezinkampani ukuya ezihambeli noma ukuvakasha kweqembu, i-Sand Pebbles Tours inikeza ukuhamba okunethezeka okunethezeka. Inikeza ukuphepha okusheshayo nezici zomuntu siqu, kufaka phakathi isimo se-air conditioning, amaqembu wezokuthutha izimoto ze-ejensi wonke amasayizi kuya kumasayithi amahle kulo lonke isifunda. Ngaphandle kwesevisi engcono yokuthutha komhlaba, inkampani ingenza futhi amalungiselelo amahhotela ezinkanyezi ezinhlanu ukuze uthole izidingo ezingcono zokuhlala zabantu noma amaqembu.
Abaqhubi bezinkampani abanolwazi futhi abanolwazi banikeza uhambo oluphephile futhi olujabulisayo njalo, ukuthuthukisa konke ukuvakasha ngolwazi lwendawo kanye nensizakalo yobungane. Bajwayelene kakhulu nendawo futhi bayajabula ukwabelana ngolwazi lwabo lomuntu siqu ngezimangaliso zomlando, zenkolo nezemvelo ezitholakala kulo lonke isifunda.
I-opharetha esemthethweni yokuthutha kwamaqembu amaningi kazwelonke nakwamanye amazwe, Izinkambo Zezintambo Zesihlabathi izimoto ezingaphezu kwezingamashumi ayisishiyagalolunye zezimoto zamabhizinisi okunethezeka kwezimoto zihlanganisa ukwenza nezinhlobonhlobo ezivela kubakhiqizi abahlukahlukene ezihlanganisa iMercedes Benz, BMW, Honda, iToyota, Skoda nokuningi. Ngokuthile okuvela kuma-sedans okunethezeka kuya kubaqeqeshi abakhulu kakhulu, inkampani ingakwazi ukuhlala kalula kumaqembu afika kubantu abangu-45 ngosuku lokuvakasha nokuningi.
Zonke izimoto zenkampani kanye nabaqeqeshi zingaphansi kweminyaka emithathu ubudala, zifaka izinsiza zakamuva, zinikeze amahora angu-24 amahora ngosuku nsuku zonke. Ukuhambela noma yikuphi umuzi, ukuvakasha noma ukuvakasha noma okunye emaphandleni kulula, okusheshayo futhi okungabizi ngeSand Pebbles Tours. Xhumana nokuhola ukuqashwa kwemoto inkampani namuhla ngokuhamba kwakho okulandelayo ku-Odisha.
Izinto Okumele Uzicabange Lapho Uqasha U-Odisha Wokuqasha Umqeqeshi